Toggle navigation बिश्व्तर्क विचार बिशेष समाचारवित्त पूँजी बजारकर्पोरेटसहकारी–कृषिअन्तर्राष्ट्रियबिबिधEnglish Newsनेपाल अन्तर्वार्ता
अन्तर्वार्ता एमालेका नेता तथा सांसद् हरिप्रसाद उप्रेती एमालेलाई मधेसवादी दलले नरुचाए पनि मधेसी जनताले रुचाएका छन् गत वर्ष संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानको विषयमा असहमति जनाएका मधेसवादी दलहरु त्यतिबेलादेखि नै एमालेसँग रुष्ट बन्दै आएका छन् । .... संविधान संशोधन टुंगोमा पु–याएर मात्र निर्वाचन हुन्छ स्थानीय निर्वाचन जेठ १० गतेभित्र गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । चुनाव गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन यो सरकारलाई एमाले र मधेसवादी दललाई सन्तुलनमा ल्याउन ठूलो चुनौती देखिन्छ । एमालेले संसद्मा सरकारले लगेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर काम गर्नुपर्ने ....नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संसद् रामेश्वरप्रसाद ढुुंगेलप्रदिपकुमार कोइराला महानिर्देशक, उद्योग विभाग वैदेशिक सहायता होइन, लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ विभागमा भर्खरै आउनुभएको छ, तपाईंका प्राथमिकताका विषयहरु के–के छन् ?
पुरानै कामहरुलाई नै निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने हो । त्यसमध्ये अहिले तीनवटा पक्षलाई केन्द्रमा राखेर विभागका काम अनि कतव्र्यहरु अघि बढाउने तयारी गरेको छु । उद्योग मन्त्रालयबाट अहिले........... नेपालले खेपिरहेको व्यापारघाटा कम गर्नका लागि हस्तकला रामवाण हो २०४८ देखि हामीले हस्तकला मेला गर्दै आएका छौँ । बीचमा केही समस्या देखिएर निरन्तरता दिन भने सकेनौँ । हामीले विगत छ वर्षदेखि निरन्तर क्यालेण्डरकै रुपमा मेला तथा प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्दै............धर्मराज शाक्य अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघधनबहादुर घले नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद् एमाले तराईलाई मात्रै समेटेर राज्य निर्माण गर्न कदापि तयार छैन उनीहरुले लगाउनुभएको आरोप एउटा भ्रम हो । हामीले गर्दा संघीयताको काम रोकिएको हैन । हामीले यति मात्रै भनेका छौँ, जनताले चाहेजस्तो संघीयता दिनुपर्छ । संघीयता भनेको कुनै एक जाति तथा एक वर्गको होइन सबैलाई समेटेर त्यसको सीमाङ्कन तथा नामकरण गरिनुपर्छ । अहिले यसमा दुईवटा मुख्य विवादहरु........... लाभग्राहीहरुले आफ्नो उपस्थितिविना नै बैंक खाता खोल्न सक्नेछन् - रामप्रसाद थपलिया, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ११ जिल्लाका भूकम्पपीडितहरुको सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ । यसबाट सात लाख १७ हजार सात सय १८ घरधनी रहेका छन् । जसमध्ये पाँच लाख ३३ हजार चार सय ५४ लाभग्राहीहरुको नाम अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा समावेश भएको छ र यी घरधनीहरुले अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सबैले अनुदान पाउन सक्छन् भन्ने हामीले ग्यारेन्टी गर्नसक्दैनौँ ।
लाभग्राहीहरुले सरकार तथा प्राधिकरणले तोकेका शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ । शर्तहरु पालना नगर्नेले अनुदान सूचीमा नाम हुँदैमा पाउने आधार भने हुँदैन । लाभग्राहीहरुले अनुदान पाउन निश्चित प्रक्रिया र शर्तहरु पालना गरेपछि सम्झौता हुन्छ र उहाँहरुले पाउने अनुदान बैंकमार्फत उपलब्ध हुनेछ । हामीले सुरुको अवस्थामा र पछिल्ला चरणहरुमा उपलब्ध गराउने अनुदान कसरी प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । पहिलो चरणको अनुदान पाउनेले बैंक खाता खोलिसकेको अवस्था रहेको छ भने दोस्रो चरणको अनुदान पाउनेले बैंक खाता खोल्ने क्रम बढिरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ । त्योभन्दा पछिल्लो चरणका लाभग्राहीहरुले आफ्नो उपरामप्रसाद थपलिया, प्रवक्ता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविमल ढकाल अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कामदारले पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ऐनहरु बनाउनुपर्छ वि.सं. २०२३ साल जेठमा पाल्पा जिल्लामा जन्मिएका विमल ढकालले मेनपावर व्यवसायमा आउनुपहिले २०५७ सालदेखि ०५९ सालसम्म तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्रीको स्वकीय सचिवको रुपमा काम गरेका थिए । वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक ढकाल २०६३ देखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लागेका व्यक्ति हुन् । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमको अध्यक्ष हु“दै हाल सल्लाहकार समेत रहेका ढकाल २०७२ असारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । संघका अध्यक्ष ढकालस“ग आर्थिक दैनिकका संवाददाता पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीका हकहितका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ ?
व्यावसायिक हकहितका लागि संघले स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर काम गर्दै आएको छ र अहिले पनि गरिरहेको छ । व्यवसायीहरुलाई सहज र सरल तरिकाले काम गर्न मिल्ने ऐन नियमहरु संशोधन गराउने प्रयास संघले अहिले गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु केही आन्दोलित देखिन्छन्, यसको कारण र समाधानका उपायहरु केही छैनन् ?
केही व्यक्तिहरु आफ्नो निजी स्वार्थको परपूर्ति गर्न ठूलो संख्यामा विदेशमा रोजगारी दिन सफल व्यवसायीहरुको हितविपरीत कार्य गर्न अग्रसर छन् । उनीहरुले एकपक्षीय रुपमा गरेका निर्णयहरुले नेपालमा भएका सात÷आठ सय व्यवसायीहरु र ती व्यवसायमा निर्भर परिवारहरु मर्कामा पर्ने निश्चित छ । तर, यस बीचमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग हाम्रा केही सहमतिहरु पनि भएका छन् । वर्तमानमा देखिएको असहज वातावरणलाई समाधान गर्नको लागि विगतमा सरकारले गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । र हाम्रो संघसँग मन्त्रालयले गरेको सहमतिलाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
केही व्यवसायीहरुबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरु ठगिने गरेको सुनिन्छ र धेरैले मेनपावरहरुलाई सहजै विश्वास पनि गर्दैनन्, किन ?
यो सरासर झू लघुवित्त सेवालाई विविधीकरण गर्न जरुरी छ विगत एक दशकदेखि बुटवलमा कार्यरत चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिकर कार्कीस“ग लघुवित्तको अवस्था र चौतारी लघुवित्तको बारेमा आर्थिक दैनिकका संवाददाता पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
चौतारी लघुवित्त बैंकको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
भर्खरै सञ्चालनमा आएको यो वित्तीय संस्थाले गएको माघ १० गतेबाट वित्तीय कारोबार शुभारम्भ गरेको हो । यसर्थ, सञ्चालनको सुरुवातमै रहेको हुँदा हाम्रो व्यवसाय पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । सञ्चालनको भर्खरै तीन महिना पूरा भएको छ, यस अवधिमा हामीले रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु र पाल्पा जिल्लामा छवटा शाखा स्थापना गरिसकेका छौं । त्यसमा अझै वित्तीय पहुँच कम भएका सल्यान र रोल्पा जिल्लामा पनि शाखा विस्तारको क्रममा रहेका छौं । सम्भवतः यहि महिनाको अन्तिमसम्म हामी ती जिल्लाहरुमा पनि शाखा विस्तार गरिसक्नेछौं । वित्तीय संस्थाले हालसम्म पाँच करोड २५ लाख लगानी गरिसकेको छ । छ करोड अधिकृत र तीन करोड जारी पुँजी रहेको यस संस्थाको संस्थापकहरुबाट संकलन गरिएको विद्यमान चुक्ता पुँजी दुई करोड दश लाख रहेको छ । केन्द्रीय कार्यालय बुटवलमा रहेको छ, भने लुम्बिनी अञ्चलका छ जिल्ला
(रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँमनिकर कार्की, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था, बुटवलचिन्तामणि सिवाकोटी, डेपुुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक अवस्था हेरेर लघुवित्त बैंकहरुको अनुमति प्रक्रियामा पुनरावलोकन हुनसक्छ वि.सं. २०२२ साल साउन ६ गते आठराई ह्वाकु, तेह्रथुममा जन्मिएका चिन्तामणि सिवाकोटी हाल नेपाल राष्ट्र« बैंकको डेपुटी गभर्नरका रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्रिभुुवन विश्वविद्यालयबाट बीएल, एमबीए गरेका सिवाकोटीले अमेरिकाको साउदर्न न्यू हेम्पासायर युनिभर्सिटीबाट वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । वि.सं. २०४४ सालबाट नेपाल राष्ट्र« बैंकमा प्रधान सहायकमा नियुक्त भएका सिवाकोटी २०७२ फागुनबाट मात्र डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । उनै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीस“ग मुुलुकको समसामयिक वित्तीय अवस्था र वित्तीय संस्थाहरुबारे केन्द्रित रहेर आर्थिक दैनिकका रुपन्देही संवाददाता पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः— लघुवित्तमा पुँजी वृद्धिको नीति सही छ तर कतिसम्मर कहिलेसम्म सबैको चासो छ लघुवित्त संस्थाहरुले देशको हरेक क्षेत्र र जनमानसमा वित्तीय पहुँच पु-याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।- राम बहादुर यादव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, « Prev 123..Next»